I-Fahrdienst yaseBasel Limousine Service & Transfer Transfer ☆ I-Taxi yaseBasel Airport
IsiThuthi saseBasel Airport kunye neTeksi iBasel Airport
Inkonzo yokuqhubela phambili yeklasi eyongezelelweyo, ilula kwaye ikhululekile ukusuka ku-A ukuya kwi-B. Ingaba i-aéroport idluliselwa ngeteksi yeBasel Airport okanye inkonzo ye-limousine eBasel, senza imisebenzi yethu ngokuthembekileyo kwaye ingenangqiqo.
Xhagamshelana nathi ngefom yesicelo sethu okanye usithile i-41 78 861 35 50.
der IFahrdienst Basel inkonzo yokugcinwa kakuhle kwe-limousine yaseBasel neZurich, ukudluliselwa kwinqwelo-moya kunye neenqwelomoya eziphantsi kweeteksi eBasel. Iziganeko, ii-fairs (IBasel yoBugcisa, IBaselworld), iintlanganiso (WEF Davos,), iimeko ezizodwa, ukuhamba ngasese okanye kweshishini. Uhamba kusasa? Ufike ebusuku okanye unemithwalo eninzi? Emva koko unathi, i Ukudluliselwa kweenqwelo-moya kuZurich kunye neBasel ngokuchanekileyo, zethu KwiTeksi yaseBasel Airport ihlala ihamba. zethu Ukutshintshiswa kweSibhedlele seBasel Izithuthi ziyakwazi ukufikelela kubantu be-7 kunye nayo yonke imithwalo yakho. Inzuzo kwienkonzo zethu ezingabizi kwaye zithengelekile.
Ukubala nje ukuhamba kwakho
Iinkonzo zethu: Ukuthunyelwa kweenqwelo-moya ngeTeksi yaseBasel Airport,inkonzo yokuthuthwa
Inkonzo yeLimousine kunye neTeksi yaseBasel Airport - Nathi uqhubela phambili!
Siyakwamkelwa kwisevisi yethu yokudlulisa eBasel! Ngaba uhambela umzi, udlula okanye ufuna ukudluliselwa kwi-Basel Limousine Service Basel okanye kwiTeksi yeTekesi? Konke oku kunye nokunye okuninzi, abathandekayo bethu, abaqhubi abaqeqeshwe, kunye kunye iinqwelo ezizodwa maneka. Thina ungumqhubi ngaphakathi kwesi sixeko, umzekelo kwi-moya ye-moya e-Basel Baselworld i-Art Basel. Sifumaneka kubathengi bezorhwebo kunye nabantu abazimeleyo. Ukongeza, unokwenza inkonzo yethu ye-limousine eBasel nakwiindawo ezikufutshane, kodwa kunye nokuya kwezinye iidolophu umzekelo ku-Davos KwiQumrhu loQoqosho loLuntu zethu Inkonzo yemoto WEF Davos, Qhagamshelana nathi ngoku kwaye uzikhusele i-limousine ekhethekileyo eBasel naseZurich!
I-Basel Limousine Service Basel - Kusuka eBasel ukuya eZurich Airport
Basel Unyaka ngamnye izigidi zeendwendwe zivela eSwitzerland, eJamani okanye kwiGulf States. Akunabodwa nje ukuba bayibhala isigidimi esihle kwiindawo zokuhlala ebusuku, nabo bafuna ukuhamba. Ukususela kwi-A ukuya kwi-B, umzekelo, ukusuka eBasel ukuya eZurich Airport kwisiqhamo sesithathu esikhulu eSwitzerland, yiloo nto iTeksi Basel Airport inokuyenza. I-drive ukusuka ehotele ukuya kuyo nayiphi na indawo kwisixeko okanye idluliselwe kwenye idolophu. Okanye nelizwe elithile! Ngokuchanekileyo zezi ziganeko ezininzi kwiindwendwe zethu kwisixeko sethu inkonzo yethu ye-limousine eBasel. Ngokukodwa abahanjisi kunye nabahamba ngezoshishino basebenzisa i-shuttle ekhethiweyo e-Basel okanye bafunde inkonzo yethu ye-limousine ngexesha lokuhlala kwabo eBasel. Kananjalo, ukuba ufuna nje uhambo olungalibalekiyo, umzekelo njengenxalenye yomhla wokuzalwa okanye umtshato, hamba kakuhle kunye nenkonzo yethu ye-limousine eBasel! Kwaye thina kwi-transferservice-basel.ch ziguquguqukayo kwaye zinikela ngenkonzo yeenqwelo-moya ngaphandle kwemida. Ukuba ufuna ukukuqhubela kwezinye iikanton okanye kumazwe, akuyiyo ingxaki kuthi!
Iziganeko ezifanelekileyo zokufumana i-limousine / service upscale iteksi yeBasel Airport
Kodwa masiqale sihlale kwimida yeSixeko saseBasel, emva kwayo yonke indawo yeekhilomitha ezili-18 ze-23: Ukucinga ukuba uhlala eBasel okanye uchithe ixesha elithile apha, kukho ininzi yezihlandlo zokubhuka kwi-Limousine Service yethu eBasel. I-Basel yidolophu yesithathu enkulu kunazo zonke eSwitzerland kwaye enjalo kuninzi kunika abantu abaninzi. Oku kuchaphazela bonke abahlali, kunye neendwendwe. Ukuba u tyelela isixeko, kuba yizizathu zoshishino okanye ezizimeleyo, ungasebenzisa iNkonzo yethu yeTeksi yaseBasel Airport njengeyinqanaba lokugqibela ukuya kwisixeko sethu esihle. Ngaphezu kwazo zonke, oopolitiki abaphezulu, abadumileyo okanye abantu abashishini abavela kwamanye amazwe bafuna ukuqasha i-limousine nathi, kuba bayayixabisa ingqiqo kunye nenkonzo ekhethekileyo. Ngokomzekelo, abaphathiswa, amabhanki, abaphathi abaphezulu okanye abadibanisi baqeshisa i-limousine evela kuthi eBasel kwaye bayisebenzise njengeteksi yesikhululo se-airport. Iinkampani eziyaziwayo njengeNovartis, Roche kunye ne-Swiss International Airlines nazo ziseBasel, apho phakathi kwezinye iindawo ezininzi, zibonelela ngezoshishino eziqhelekileyo eziphezulu kwiBasel. Ngaba ungathanda ukuqasha i-limousine eBasel kumcimbi wezoshishino okanye uhambo lokubheka eBasel? Uhambo loshishino unokrazula imoto efanelekileyo ngokusuka kuthi ngexesha elifanelekileyo kwindawo efanelekileyo! Ngokuqinisekileyo, oku kusebenza nakwiihishini ezizimeleyo, njengoko iBasel isoloko ilungele ukutyelela abantu abazimeleyo (kwaye ukuba uvela eZurich, unokubhala i-Airport Transfer Zurich). Nantsi oku symphonyoko IMyuziyam yaseBasel, i Messe Basel okanye, ukusuka kwiCandelo leMpahla, iBasler Fasnacht kunye nokunye ukufumana. Ukongezelela kwezi ndawo zibalaseleyo, kukho iindawo eziphambili ebomini apho iteksi ephakamileyo yaseBasel ibonisa ingcamango efanelekileyo. Umzekelo, inkonzo yethu ye-limousine ifumaneka kwimitshato, imihla yokuzalwa okanye imikhosi. Unqobe kunye ne-Limousine Service yaseBasel, ngesitayela.
I-Limousines yesevisi yaseBasel - Iinqwelo zethu kwi-capital city
Kutheni ungathanda ukuyalela iBasel yaseTeksi? Ngenxa yokuba ufuna i-transit ekhethekileyo okanye uhambo lweedolophu ngeBasel, kwiimoto eziphakamileyo eziphezulu, ngabaqhubi abadibeneyo? Yiyo kanye indlela yethu yeVIP Shuttle Basel, esiqinisekisa ngayo ngezithuthi kwi-limousine yesevisi. Inkonzo yethu eyongezelelweyo iklasi isekelwe kumlinganiselo omkhulu kwiklasi eyongezelelweyo yabenzi bezithuthi ezifanelekileyo. Ukuze siqinisekise uhambo olukhuselekileyo nolulungekileyo, sithembele kumgangatho wezithuthi ezenziwe eJamani: Nathi njengenkonzo yakho ye-Limousine eBasel, awukwazi ukufikelela kwindawo oya kuyo. Sifuna ukuba uzive ukhululekile kwisixeko sethu, naphi na apho uya khona. Le yindlela enhle yokwahlula kwietekisi, kuba asikhuthazi nje kuphela, singumsebenzi we-limousine. Ngoko ke, sisebenzisana neemoto eziphathekayo eziphezulu, ezithembekileyo neziphezulu:
• I-Mercedes E kwiklasi
• Iinqwelo zeeklasi zeMercedes E
• iMercedes Viano (izihlalo ze-8)
• I-Class ye Mercedes
• I-VW Passat ifa
Izithuthi kwi-limousine yethu inkonzo zifanelekile kokubili ukudluliselwa kwabantu ngabanye, njenge-exclusive shuttle okanye iihambo ezinamaqela amakhulu. Kuzo zonke iimfuno sinesithuthi esiphezulu "ekuqaleni". Sithatha abathengi bethu kuyo yonke indawo kwaye siyithatha yonke indawo, yenye yee-maxims kwi-transferservice-basel.ch.
Ukutshintshiswa kweTeksi yeBhasili yeTeksi - Hhayi nje ukusuka eBasel ukuya eZurich Airport
Akukusoloko ku funeka ukuba "nje" iteksi yeBasel Airport - i-VIP yokupaka i-VIP iya kukuthatha naphi na apho uyifunayo. Cinga nje ungakhange uvakashele iBasel, kodwa iSwitzerland yonke. Ngaba ungathanda ukuqhutyelwa kwisiza sezindiza saseZurich kunye nokuthunyelwa kweenqwelo-moya kwiBasel okanye ukutshutshiswa eBern? Kakade ke, sinika le nkonzo yomqhubi kwiinqwelo zethu ezizodwa. Kodwa kungekhona kuphela loo nto, inkonzo yethu ye-limousine isebenza kumazwe ngamazwe, uthanda ukuhamba ukuya kwi-70km kude ne-Freiburg eJamani, ukuya eStuttgart okanye eMunich. Kwakhona iLiechtenstein, iFransi, iItali okanye iFransi yindawo enokwenzeka ukuba unokuyifumana nenkonzo yethu yamazwe omhlaba we-limousine.
Kwiimimousine zethu ezikhethekileyo awuyi kuphonswa nayiphi na into, ungathuthuzeli okanye ukhuseleko. I-Apropos: Bonke abaqhubi bethu abonakaliswa ngokuqonda kwabo kuphela, kodwa nangendlela yabo yokuqhuba ukuqonda. Ngokuqinisekileyo oko akuthethi ukuba awukwazi ukwenza ukuba uqeshwe ngexesha. Abaqhubi bethu baqhelana nemimiselo yendlela yokuhamba kwimizila emibini yasemadolophini kunye nohambo olude kumazwe ahlukeneyo kwaye baya kukuthatha ngokukhawuleza njengokukhuselekileyo kwindawo oyifunayo.
Iqela leTeksi yeBasel Airport